Women’s Resilience to Natural Disaster
Resource Center in Rakhine, Myebon
We Stand Together for More Women Leaders
Yaung Chi Thit (YCT) Organization; formerly known as the Burma Law Study Group for Peasants and Workers, is non- political, non-religious association, which was established in 2008. It is an organization that has the vision “To buildapeaceful and democratic society based on justice and gender equality.”
“To buildapeaceful and democratic society based on justice and gender equality.”
The most recent top stories.
အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။”မော်ဂျူး-၁၊ ၂”သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး (၂၉) အား ထပ်မံ၍ ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း” မော်ဂျူး-၃”
အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။ စစ�
ကျား/မ ရေးရာခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်း မော်ဂျူး(၃)အတွက်ဆွေးနွေး
ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့မှရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြုလုပ်နေသော (၁) နှင့် (၂)တွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့်မြို့နယ်(၄)ခုမှ သင်တ
”အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမော်ဂျူး-၂”
စစ်တွေ၊ ပေါက်တော၊မြောက်ဦး နှင့်ပုဏ္ဏားကျန်းမြို့နယ် တို့ရှိ ကျေးရွာ(၈) ရွာမှ “မော်ဂျူး-၁”သင်တန်းတက်ရောက်�